အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသနအဖွဲ့ အစည်း IRRI ဆိုသည်မှာ – Agriculture & Technology
Primarily focus about Tech-related news on Agricultural Sectors in Myanmar.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသနအဖွဲ့ အစည်း IRRI ဆိုသည်မှာ
Date: October 13, 2016Author: MMAGTECH0Comments
The International Rice Research Institute (IRRI) သည် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသန အဖွဲ့ အစည်း” တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့ အစည်းကြီးသည် ဆန်စပါးသိပ္ပံပညာရပ်ဖြင့် ဆင်ရဲမှုနှင့် ဆာလောင်မှုတို့ လျော့ နည်းစေရန်နှင့် လယ်သမားများ၊ စာသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဘဝများအား တိုးမြင့်စေရန်နှင့် နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် စသည်တို့ ဖြင့် ရည်ရွယ်ဖွဲ့ စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ IRRI ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင် အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူ Ford and Rockefeller foundations တို့ မှ ဖွဲ့ စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ်မှုရှိ၍ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ပဲ ပညာရေးနှင့်သုတေသနအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသန အဖွဲ့ အစည်း – IRRI သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Los Baños မြို့ တွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး ၄င်း၏ရုံးခွဲများအား အာရှတိုက်နှင့် အာဖရိကတိုက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံပေါင်း ၁၇ နိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်တို့ ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
This article originally appeared in English-version at: IRRI
Published by MMAGTECH
MMAGTECH is founded in Myanmar by young entrepreneurs and the group primarily focus about Tech-related News on Agricultural Sectors, Political News, Economic News and International Affairs.	View all posts by MMAGTECH
Previous Previous post: ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အကောင်းဆုံး လေ့လာခြင်း
Next Next post: Rice Transplanter – စပါးစိုက်ပျိုးစက်
You can advertise your Business (or) Company in this website.
For more information, please send us your form to discuss about your advertisement.
Potassium nitrate (KNO3) December 19, 2016
​စ​ပါး​စိုက်​ပျိုး​သည့် ​နည်း​စ​နစ်​အ​မျိုး​မျိုး October 29, 2016
​ဖော့​စ​ဖိတ်​နှင့်​ ပို​တက်​စီ​ယမ်​ ဓာတ်​မြေ​သြ​ဇာ ​စီ​မံ​ခန့်​ခွဲ​မှု October 26, 2016
​နိုက်​ထ​ရို​ဂျင်​ဓာတ်​မြေ​သြ​ဇာ​စီ​မံ​ခန့်​ခွဲ​မှု October 24, 2016
စ​ပါး​သီး​နှံအာ​ဟာ​ရဓာတ်​များ ​စီ​မံ​ခန့်​ခွဲ​ခြင်း​နည်း​ပ​ညာ – အပိုင်း (၂) October 23, 2016
Agriculture Featured Myanmar Welcome
© 2018 Agriculture & Technology